Avid သည်သေးငယ်သောအဆောက်အအုံများနှင့်စီမံကိန်းစတူဒီယိုများ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိပ်စာလိုအပ်ချက်များအတွက် Audio Control Surface Portfolio ကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » avid တိုးချဲ့အသံထိန်းချုပ်ရေးက Surface Portfolio သေးစီမံခန့်ခွဲရေးစီမံကိန်းစတူဒီယို၏ သာ. ကောင်း၏လိပ်စာလိုအပ်ချက်များမှ
လွန်စွာလိုလားသော Connect ကိုတိုက်ရိုက်, Nashville, Tenn, ဇူလိုင်လ 18, 2019 ။ - At avid Connect ကိုတိုက်ရိုက် Nashville နွေရာသီ NAMM 2019 မှာ, လွန်စွာလိုလားသော® (Nasdaq: avid) နှစ်ခုအသစ်သောအသံထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်-The ထုတ်ဖော်ပြသ avid S4 နှင့် avid S1- သေးငယ်အဆောက်အဦနှင့်စီမံကိန်းစတူဒီယိုမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်။ ထိုထုတ်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အရှိဆုံး, ဘက်ပေါင်းစုံအစွမ်းထက်သေးတတ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်များကိုနှောင်းပိုင်းတွင် 2019 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လွန်စွာလိုလားသော S4 ၏တန်ခိုးနှင့် Workflows ဆောင်တတ်၏ လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Pro ကို Tools များ | S6 ဘတ်ဂျက်-သတိအသံပညာရှင်များမှထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်နှင့် Mid-size ကိုဂီတနှင့်တစ်ဦး Ergonomics နှင့်ပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းအထုပ်ထဲမှာအသံ post ကိုအဆောက်အဦမှအသေးစား။ အဆိုပါ လွန်စွာလိုလားသော S1 ဟာသူမတူနိုင်တဲ့အမြန်နှုန်း, ကြွယ်ဝသောအမြင်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်များ၏ software ကိုပေါင်းစပ်ကယ်တင်တတ်၏ လွန်စွာလိုလားသောမည်သည့်အာကာသသို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်များအတွက်လွယ်ကူသောမထိုက်မတန်မယ့်တစ်ဦးခရီးဆောင်, slimline မျက်နှာပြင်၌ 's ကို High-end consoles စ။
"ဒီ လွန်စွာလိုလားသော S4 နှင့် S1 ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ဂီတရောနှော, သေးငယ်စတူဒီယိုနှင့်ပညာရေးအဆောက်အဦ, ပါဝါအဘို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြေဆိုခြင်း, workflow နှင့် Pro ကို Tools များ၏သော့ချက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သောမတိုင်မီစွမ်းရည်၏လောကဓာတ်ဖွင့် | ပိုပြီး်နှင့်တတ်နိုင် In-စတူဒီယိုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ S6 "ရော့က D'Amico, ဒါရိုက်တာ, အော်ဒီယိုနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာကပြောပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော။ "လွန်စွာလိုလားသော ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်, ဆော့ဖ်ဝဲ, အသံ I / O နှင့်စောင့်ကြည့်စွမ်းရည်အသုံးပြုသူရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်စနစ်ကဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်။ "
အတူငယ်များစတူဒီယိုများအတွက်ကမ္ဘာ့အတန်းအစားရောစပ် လွန်စွာလိုလားသော S4
နှစ်လယ်ပိုင်းအရွယ်ဂီတစတူဒီယိုနဲ့ audio post ကိုအဆောက်အဦမှအသေးစားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, လွန်စွာလိုလားသော S4 ဆိုအယ်ဒီတာသို့မဟုတ်ရောနှောဖို့စက်မှုလုပ်ငန်း-စံ S6 Workflows ကယ်တင်တတ်၏။ ဒါဟာပြုမူနှင့် software တစ်ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ extension ကိုများကဲ့သို့ခံစားရ, ထိုကဲ့သို့သော Pro ကို Tools များ, Nuendo, Pyramix, Logic Pro ကို, Cubase နှင့်အခြားအသံ software ကိုအဖြစ်မဆို EUCON-enabled ဒေါ်နှင့်အတူတစ်အတော်လေးဘက်ပေါင်းစုံအတွေ့အကြုံ, ပေး။ S4 လည်းလျင်မြန်စွာစွဲငြိဖွယ်ရာအသံစီမံကိန်းများကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မှတ်တမ်းတင်ဂီတအဘို့အပေါင်းဘော်ရောနှောရိုးရှင်းသော cue ကနေအရာရာကိုကိုင်တွယ်ရန်လက်ျာဘက်မျက်နှာပြင်ကနေ TalkBack, listenback နှင့်စပီကာသတင်းရင်းမြစ်များနှင့်အဆင့်ဆင့် assign နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမှအင်ဂျင်နီယာများနိုင်ပါတယ်။
S4 မျက်နှာပြင်ကနေညာဘက်ကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်-res Pro ကို Tools များ waveforms, scrolling ရန်, ရုပ်သံလိုင်းမီတာအုပ်စုများ EQ ခါးဆစ်နှင့်အလိုအလျောက်ဒေတာကနေအရာအားလုံးဖော်ပြရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အမြင်အာရုံတုံ့ပြန်ချက်ပေးစွမ်းသည်။ အဆိုပါလွယ်ကူသော-to-Configure, Semi-modular မျက်နှာပြင် display တွေ, Joystick, စာတိုက်နှင့်ဖု module တွေထည့်သွင်းဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ, 8 ထံမှ 24 faders မှအသုံးပြုသူများတိကျတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်စံပြ system ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ Pro ကို Tools များနှင့်အတူတွဲလိုက်တဲ့အခါ | Ultimate, S4 အထိရောက်ဆုံးလက်ပေါ် Dolby Atmos ဆိုအခန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖော်စပ်တတ်၏။
နှင့်အတူမည်သည့်အာကာသအတွင်းကြီးမားသောရောထွေး လွန်စွာလိုလားသော S1
လွန်စွာလိုလားသော S1 အသံပညာရှင်များလက်-on ကိုအမြန်နှုန်း, တိများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အသံပိုမြန်ပေါင်းဘော်ရောနှောကယ်နှုတ်တော်မူဖို့လိုအပျ software ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ပုဒ်ကနေစတီရီယိုသို့မဟုတ်ပတ်လည်အတွက်ဖော်စပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့, S1 ဆိုဂီတလုပ်ငန်းအသွားအလာအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမြင်အာရုံတုံ့ပြန်ချက်ပေးစွမ်းသည်။ အဆိုပါ S6 နှင့် S4 ကဲ့သို့ပင်သစ်ကို S1 Pro ကို Tools များနှင့်မီဒီယာ Composer နှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောပေါင်းစည်းမှုအပေါင်းထိုကဲ့သို့သော Logic Pro ကို, Cubase, Premiere Pro ကိုအဖြစ် Third-party application များအတွက်ဇာတိထောက်ခံမှုနှင့်ထို့ထက် ပို. ကမ်းလှမ်းရန် EUCON စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုကြီးထွားအဖြစ် S1 နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအလွယ်တကူမျက်နှာပြင်စကေးနိုင်ပါတယ်။ အသံပညာရှင်များအတူတကွ-လေးယူနစ်အထိချိတ်ဆက်ပင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Pro ကို Tools များ | သငေ်္ဘာကျင်းစီစဉျတစ်ခုတည်းတိုးချဲ့နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံမျက်နှာပြင်ဖန်တီးပါ။ တုံ့ပြန်မှုမော်တော် faders နှင့်ဘူးသီးကနေအစာရှောင်ခြင်း-access ကို touchscreen က workflow နှင့်ဖျသော့ချက်များဖို့တစ်ခုတည်းထိတွေ့နှင့်အတူရှုပ်ထွေးတာဝန်များကိုဖြည့်များအတွက်, S1 ဆိုဂီတ, အသံပို့စ်, သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုစီမံကိန်းကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့အမြန်နှုန်းနှင့်ဘက်စုံသုံးပေးပါသည်။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် 2019-07-18
ယခင်: avid တစ်ရပ်ကွက်သန်း avid Link ကို App ကိုအသုံးပြုသူများမှဂီတဖြန့်ဖြူးပို့ဆောင်
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုပို့ဆောင်ရေးနှင့် IBC2019 မှာ Software Development လိုင်းနှစ်ဦးစလုံးမှသိသိသာသာတိုးမြှင့်မိတ်ဆက်ဖို့ Medialooks